विश्वमा कोरोनाको सन्नाटा तर चीन भने गुल्जार « MNTVONLINE.COM
विश्वमा कोरोनाको सन्नाटा तर चीन भने गुल्जार
दुनियाँ घरभित्र थुनिएका बेला चीन खुल्ला छ। दुनियाँ कुँजिएका बेला चीन फरफराइरहेको छ। दुनियाँमा आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुँदा चीन गुल्जार छ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले यतिबेला भारत र नेपाल नराम्ररी थिचिएका छन् । विश्वका अन्य मुलुकहरु पनि राम्ररी चल्मलाउन पाएका छैनन्। वर्तमानमा मात्र होइन केही देशहरुमा कोरोनाको घनचक्करले पारेको प्रभाव वर्षौसम्म रहने अनुमान गरिएको छ। तर चीनको अवस्था भने समस्त विश्वको भन्दा भिन्नै छ। चीनले प्रभावकारी ढङ्गले महामारी नियन्त्रण गरेको छ र आफ्ना नागरिकलाई यस कुराबाट विश्वस्त बनाएको छ। जनताको जिउधनको सुरक्षामा चीन सरकारले सधैँ प्राथमिकता दिने गरेको छ। जनताले पनि चीन सरकारका नीतिलाई खुल्ला हृदयले सहयोग गर्दै अनुशासित रुपमा सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछन्। फलस्वरुप चिनियाँ अर्थतन्त्र महामारी पूर्वकै अवस्थामा फर्किएको छ। यसको उदाहरण हो मे १ देखि ५ तारिखसम्म चीनमा भएको सार्वजनिक विदाको चलहलपहल र आर्थिक कृयाकलापको गुल्जार।
चीनमा वर्षमा तीनचोटी लामो विदा दिइन्छ। चिनियाँ नयाँ वर्षको विदा चीनमा सबैभन्दा लामो हुने गर्छ। त्यसपछि मे १ तारिखमा दिइने श्रमिक दिवसको विदा र अक्टोबर १ तारिखमा दिइने चिनियाँ राष्ट्रिय दिवसको विदा हो।
यो वर्ष मे १ तारिख शनिबार परेको थियो। शनिबार विदालाई सोमबार दिइएको थियो। अनि मे १ तारिख भन्दा अगाडिको आइतबार र मे १ तारिख पछाडिको शनिबार कार्यालय लगाउने गरी मे १ देखि ५ सम्म बिदा दिइएको थियो। अगाडिपछाडिको शनिबार र आइतबार कार्यालय खोलेर एकमुष्ट विदा दिँदा कर्मचारी तथा मजदुरहरुले इच्छा अनुसार घुम्न पाउँछन्। नागरिकहरु घुम्न निस्कदा सरकारलाई फाइदा पुग्छ। उनीहरुले प्रयोग गर्ने यातायात, बस्ने होटल, खाने रेष्टुरेन्ट, पार्क प्रवेशको शुल्क, चलचित्र हेर्दा तिर्ने पैसा र किनमेलबाट राज्यले कर प्राप्त गर्छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ।
पर्यटकले गर्ने खर्च र आन्तरिक उपभोगबाट राज्य प्राप्त गर्ने आम्दानी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सानो झल्को हो मे दिवसमा चीनमा भएको आर्थिक गतिविधिहरु।
भरखरै सकिएको मे दिवसको बिदामा चिनियाँ उपभोग्य बजारले विश्वलाई आश्चर्यजनक सूचना दिएको छ। यो अवधिमा चीनमा घुम्न निस्किएका आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या २३ करोड नाघेको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ११९.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने पर्यटकीय आय १ खर्ब १३ अर्ब २३ करोड चिनियाँ युआन पुगेको छ। यो पनि गत वर्षको तुलनमा १३८.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो। पाँच दिनमा मात्र चीनभरि रहेका सिनेमाघरले मात्र १६ करोड चिनियाँ युआन कमाएका छन्। यसले पनि नयाँ रेकर्ड सिर्जना गरेको छ। मे १ तारिखदेखि ४ तारिखसम्ममा चाइना युनियनपे मार्फत भएको अनलाइन किनमेलको रकम १५ खर्ब चिनियाँ युआन नाघेको छ।
चिनियाँ पर्यटन अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ताइ पिनका अनुसार चीनले यस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्नुका पछाडि मुख्य तीन कारकतत्वले उत्साहजनक रुपमा बजारलाई प्रवर्द्धन गरेका हुन्। पहिलो महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाम हो। सर्वसाधारणले महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावप्रति विश्वास गरेका छन्। दोस्रो गत बसन्त चाडमा जन्मथलो नफर्कने आह्वान गरिएको र बिगत ‌एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपभोक्ताभित्र रहेको शिथिलतालाई उत्साहमा परिवर्तन गरेका छन्। तेस्रो विभिन्न स्थलको पर्यटन तथा संस्कृति सम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था प्रचुर र उच्च गुणस्तरको छ। यस अवस्थामा चिनियाँहरुले शान्त，स्थिर，सद्भावपूर्ण समृद्ध दिवस बिताएका छन्।
मे एक बिदाको यस्तो गुल्जारबाट चीनले प्रभावकारी रुपमा महामारी नियन्त्रण गरेको पुष्टि हुनुका साथै महामारीपछि चिनियाँ उपभोग्य बजार पुनरूत्थान भएको प्रतिविम्वित भएको छ। यसका पछाडि चीनको आन्तरिक मागको विस्तारबाट उपभोग विस्तार गर्ने, नागरिकको आम्दानी बढाउने र उपभोग गर्ने वातावरणलाई सुधारमा चीनले चालेका शृङ्खलाबद्ध नीतिले सकारात्मक र प्रभावकारी नतिजा देखाएको छ।
‘चिनियाँ बजारलाई विश्वसँग जोड्ने र चीनलाई सबैको बजारको रूपमा निर्माण गर्ने’ कुरा चीनले विश्वलाई भन्दै आएको छ। चिनियाँ उपभोग अपेक्षाभन्दा अझ द्रुत गतिले पुनरूत्थापित भइरहेको कुरा पनि यसले पुष्टि गरेको छ। चीनको भित्री मागको नीहित शक्तिलाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई अझ राम्रोसँग जोड्ने कुरालाई चीनले ‘ड्युअल सर्कुलेसन’ नीतिका रुपमा अगाडि बढाएको छ। चिनियाँ उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात मात्र गर्ने होइन चीनभित्रै खपत गर्ने नीति चीनको नयाँ हो। चीनमा ४० करोडभन्दा बढी व्यक्ति उच्चमध्यम वर्गमा पर्छन् जसले विश्वकै महङ्गा बस्तु खरिद गर्ने क्षमता राख्छन्। यी व्यक्तिले खरिद गरेपछि चीनमा उत्पादित बस्तु विदेश निर्यात कुर्नै पर्दैन। यसै पनि चीनले विश्वको कारखाना भनिन्छ। त्यसकारण चीनमा निर्मित बस्तु निर्यात गर्ने पहिलेको प्राथमिक नीतिलाई कायम राख्दै स्वदेशमै उभोक्ताको बानी परिवर्तन गराउने र बढी खर्च गराउने नीति चीन सरकारको छ। नागरिकले गर्ने खर्चमा जति बृद्धि हुन्छ त्यति धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुँदै जान्छ।
चीनका केही सहरले मे महिनाको १ तारिखदेखि ५ तारिखसम्म भित्र्याएको पर्यटकको संख्या र आम्दानीको झल्को यस प्रकार रहेको छ।
बेइजिङ नगरपालिकाका पार्क तथा दर्शनीय स्थलमा ७० लाख ६८ हजार पर्यटकले अवलोकन गरेका छन्। यस प्रकारका पर्यटकीय स्थलमा श्रमिक दिवसका विदामा अवलोकनकर्ताको संख्या हरेक वर्ष ७७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ। महामारी हुनुभन्दा अगाडि सन् २०१९ को तुलनामा पनि १९ प्रतिशत बढी पर्यटकलाई बेइजिङले स्वागत गरेको छ। बेइजिङमा रहेका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरुमा थिआनआनमन स्क्वायर，टेम्पल अफ हेभन，समर प्यालेस，ग्रेटवाल，चिडियाखाना लगायतका स्थानहरु पर्दछन्।
बेइजिङमा जस्तै शाङहाईले पनि यस अवधिमा एक करोड ६८ लाख ९० हजार पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ। यो तथ्याङ्क सन् २०२० को भन्दा १३८.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। शाङहाईले पर्यटकबाट ४० अर्ब चिनियाँ युआनको आम्दानी गरेको छ। बेइजिङसँगै जोडिएको थिआनचिन सहरले पनि ६० लाख ४० हजार पर्यटकलाई श्रमिक दिवसका अवसरमा सत्कार गरेको छ। महामारीपूर्व सन् २०१९ को भन्दा यो १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो। पर्यटकबाट थिआनचिनले गरेको आम्दानी पनि लोभलाग्दो छ। सन् २०१९ को भन्दा साढे ३० प्रतिशतले बढाउँदै थिआनचिनले यस विदामा ४ अर्ब ८० करोड चिनियाँ युआन आम्दानी गरी गरेको हो।
चीनको दक्षिणी भेगमा रहेको टापु हाइनान प्रख्यात पर्यटकीय स्थल हो। सानो टापुले चार दिनको विदामा पर्यटकबाट भन्सार छुट बिक्रीबाट मात्र ९९ करोड ३० लाख चिनियाँ युआनको आम्दानी गरेको छ। हाइनान प्रान्तको सदरमुकाम हाइखो भन्सार कार्यालयले जनाए अनुसार मे दिवसको विदामा हाइनानमा डिउटी फ्रिको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा हरेक वर्ष २४८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ। यसैगरी चीनको दक्षिणमा रहेको क्वाङ्सी स्वायत्त प्रदेशले श्रमिक दिवसका अवसरमा २ करोड २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ। ती पर्यटकबाट क्वाङ्सीले १८ अर्ब ३० करोड चिनियाँ युआन प्राप्त गरेको छ।
दुनियाँ घरभित्र थुनिएका बेला चीन खुल्ला छ। दुनियाँ कुँजिएका बेला चीन फरफराइरहेको छ। दुनियाँमा आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुँदा चीन गुल्जार छ। अब हामी आफैँ प्रश्न गरौँ यो सब कसरी भयो?
वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाली वस्तुको निर्यातमा वृद्धि
अष्ट्रेलियामा नेपग्याजमको ‘कमेडी शो’ हुने
अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा, दैनिक मृत्युमा भने नयाँ रेकर्ड
देशभर ८०१७ जनामा कोरोना संक्रमण, ५ हजार भन्दा बढी संक्रमण मुक्त
न्यु साउथ वेल्समा आज १७ हजार बढी संक्रमित थपिँदा अन्यमा कति ?
देशभर ८४५४ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमण मुक्त हुने ४ हजारभन्दा बढी
नेपालको प्रारम्भिक जनसंख्या सार्वजनिक, कति पुग्यो कुल जनसंख्या ?
आज अष्ट्रेलियामा ५२ हजार बढी कोरोना संक्रमित थपिए, मृत्युमा भने नयाँ रेकर्ड